Kitaabka Quduuska ah Maxaa Loo Baadhaa? | Farriinta Kitaabka
KU AKHRI Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Sign Language Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Danish Digor Douala Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Faroese Finnish Finnish Sign Language French Fulfulde (Cameroon) Georgian German Greek Greek Sign Language Greenlandic Guarani Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Sorani Kwanyama Laotian Latvian Low German Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Maltese Mam Manipuri Mapudungun Marathi Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Miskito Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndonga Nepali Ngabere Nias Nicaraguan Sign Language Norwegian Odia Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Romany (Southern Greece) Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Sinhala Slovak Slovenian Soomaali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Sida Kitaabka loo qaybiyay buug kale oo taariikhda binuʼaadmiga ku jira loo ma qaybin. Dad dhaqan walba ka imaaday baa qalbi qaboojis iyo rajo ka helay farriintiisa oo taladiisuna maalin walbay noloshooda ku caawisa. Adigu Kitaabka wax ma ka taqaannaa? Haddaba maanta dadku badnaantooda aqoon ma u laha Kitaabka. Haddii ad tahay qof diin ku xiran ama in kaleba waxa laga yaaba inaad Kitaabka suʼaalo ka qabtid. Buuggan waxaa loogu talaggalay inuu Kitaabka aragti guud ah kaa siiyo.
INTAADAN Kitaabka furin waxaa wacan inaad dhowr wax ka ogaatid siduu buuggan u qorsheysan yahay. Kitaabka Quduuska ah wuxuu u kala baxaa 66 buug ama qaybood. Qaybta ugu horreysa waa Bilowgii tan u dambeysana waa Muujintii.
Ayuu ka yimid Kitaabka Quduuska ah? Taasi waa suʼaal aad u fiican. Sida runta ah muddo qiyaasteedu tahay 1,600 oo sanadood 40 nin baa Kitaabka qoray. Haddaba la yaabku waa inaysan nimankan oran Kitaabka inagu naga yimid. Qorayaasha mid ka mid ah baa yiri: “Qorniin kastaa wuxuu ku ahaaday Ruuxa Ilaah.” (2 Timoteyos 3:16) Mid kalena wuxuu qoray: “Rabbiga ruuxiisii baa iga dhex hadlay, oo eraygiisiina carrabkayguu saarnaa.” (2 Samuuʼeel 23:2) Haddaba qorayaashu ayay yiraahdeen buu Kitaabka ka yimid? Rabbiga Yehowah Kan ugu Sarreeya caalamka oo dhan. Qorayaashan waxay kaloo inoo caddeeyeen inuu Ilaahay rabo inay binuʼaadanku isaga u dhowaadaan.
Haddaba waxaa jirta mid kale aan u baahan nahay inaan ogaano. Kitaabku wuxuu leeyahay farriin keliya oo muhim ah. Taasi waa caddaynta inuu Ilaahay xaq u leeyahay inuu binuʼaadanka ku maammulo Boqortooyadiisa samada ku taal. Bogagga soo socda waxaad ka arkaysaa siday farriintan ugu jirto qayb walboo Kitaabka.
Adoo niyadda waxyaalahan ku hayo bal eeg farriinta ku jirta Kitaabka Quduuska ah oo ah buugga dunida ugu caansan.
Qoridda Kitaabka waxay qaadatay qiyaas leʼeg 1,610 sanadood oo bilaabatay sanadkii 1513 C.H. ilaa sanadkii 98 C.D. *
Sagaal iyo soddonka buug ee u horreeya badnaantooda af Cibraani baa lagu qoray qaar ka mid ahna afka Aramaygga. Buugaggan waxaa loo yaqaanna Qaybta Cibraaniga ama “Axdigii Hore.”
Toddoba iyo labaatanka buug ee u dambeeya waxaa lagu qoray af Giriigga. Kuwan waxaa loo yaqaanna Qaybta Giriigga ama “Axdiga Cusub.”
Kitaabka wuxuu u kala baxa qaybo iyo aayado. Tusaalo ahaan Matayos 6:9, 10 waxaa laga wada buugga Matayos qaybtiisa lixaad aayadaha sagaalaad iyo tobnaad.
^ qayb. 9 Habab badan baa jiro oo taariikhda loo sheegi karo. Haddaba marka C.D. ama C.H. buuggan lagu qoro waxay ka dhigan yihiin “Ciise Dabadiis” ama “Ciise Hortiis.” Taariikhda waxaad kala socon karta xarriiqda buluugga ah ee ku taal bog kasta hoostiis.
Wadaag Wadaag Kitaabka Quduuska ah Maxaa Loo Baadhaa?